सिमा सुबेदी फेरी फर्केर आईन उनको नया भिडियो लिएर | Daily News Pokhara सिमा सुबेदी फेरी फर्केर आईन उनको नया भिडियो लिएर – Daily News Pokhara
Home Entertainment सिमा सुबेदी फेरी फर्केर आईन उनको नया भिडियो लिएर
Jun 26, 2017, 09:32 am4
सिमा सुबेदी फेरी फर्केर आईन उनको नया भिडियो लिएर ।निकै चर्चामा आएकी सिमा अहिले बहने माफी माग्दै फेरी अर्को भिडियो बनाईन ।उनि भन्छिन म पनि एउटा नेपालीकि खुन हु । त अर्को पल्ट भन्छिन म इन्डियन हु । बुज्न नसकिएको कुरा उनि आफै कन्फुज छिन कि उनि नेपाली हुन् कि इन्डियन । अहिले आएर बल्ल भन्दै छिन कि हामीले एक अर्कालाई सम्मान गर्नुपर्छ इज्जत गर्नुपर्छ । त्यो बेला उनको यो सोच कता गएको थियो जब उनले सर ३ करोड नेपालीलाई यो र त्यो भन्दै बदनाम गरेकी थिइन् । आउनुहोस हेर्नुहोस यस्तो भन्छिन सिमा सुबेदी ।तपाइलाई के लाग्छ यस बारेमा युट्युबमा गइ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला ।हेर्नुहोस भिडियो
Rating: 3.8. From 37 votes.
Previous Postभरतपुर काण्डः Next Postदाङ कब्जा गर्न प्रमुख दलहरुको यस्तो रणनीति
4 thoughts on “सिमा सुबेदी फेरी फर्केर आईन उनको नया भिडियो लिएर”
Rajesh Nepal June 26, 2017 at 1:25 pm
be sure about it, ki there is no any connection between Gorkha or gorkhali troops wid india ….
..hijo gorkhaland ko andolan darjeeling lai Nepal ma gabnaiko lagi vako thiyo..
aaja Nepal ko economic nd political condition naramro vayo vandaima.. Nepal lai j payo tehi vandai.. Gorkhali ko bejot gardai hindnu bhaneko afnai mukhma mutnu bara bar ho!!
nabin gurung June 26, 2017 at 3:33 pm
Thank you si so sweet information and good thinking i love nepali sissss…
pahadi ko chhoro ma June 27, 2017 at 7:01 am
yad tapai ma nepali pan r nepali maya thiyo bhane kina nepali li thado bhasha ma gali garnu hunchha ha jaha samma lag chha tapoai ma nepali pan r nepali maya bhanne sapda kos ma chhaina ho hami gorkhali garib chhau r hami kasaiko nakori garer khan chhau tar aafno sobhiman bejdainau kina ki hami ma hamro bhumi piyaro chha r hamilai hamro purkhale diyako sannai piyaro chha yak choti socher hernus hamro palpali dhaka top r sirupate khukuri jaha des dekhi bedes samma chininchha
prashnat mahasagar June 27, 2017 at 10:20 am
नेपालीहरु, विश्वमा मनुष्य भएरै मर्ने प्राणी हो ।
इतिहास…वर्तमानको एउटा ऐना हो । वर्तमानमा लागेका काला धब्बाहरु, अन्ध्यारा परिवेशहरु, अप्ठ्यारा उल्झन अनि कुठाराघातका निराकरण पनि इतिहास नै हो । तर हामी मेटाउन पाउदा वा आफु पायक कुनै ठाउँ बनाउन पाउदा रम्छौं । फोहर दूर्गन्ध भन्दै पुर्न पाएमा शान र प्रतिष्ठाका कुरा गर्छौं । र इतिहास, सत्य सोचसँग सिक बुद्धि व्यवस्था सुढृडिकरण पनि हो भन्ने बिर्सि जन्म लिने र मर्ने कुराहरुलाई मात्रै प्राथमिकता दिई सास फेरी रहेका छौं । जस्को अघिल्लो घटना भनेको बुद्ध लुम्बीनीमा अर्थात नेपालमा जन्मेको होईन् भन्ने कुरा थियो भने पछिल्लो परिणाम भनेकै गोर्खालाण्ड विद्रोह संघर्षभित्रको तीतोपना हो । हुन त त्यो कसैको अधिकारको कुरा हो जुन नेपाली कुराहरुसँग आबद्ध छन् । जस्तै कि कुनै नाउँ नेपाली “गोर्खा”, ठाउँ अर्थात लाण्ड भारतको, किन…? त्यस्तै शिरमा टोपी नेपाली, ओठमा बोली नेपाली, पहिरन नेपाली । तर पूरै शरीर भारतीय भन्ने अडान जुन गोर्खालाण्डमा भए त्यो इतिहासकै कमी हो । आफुभित्रको अहम्को सानो नेतृत्व हो । यसलाई तोडमोड गरि कुनै कोहीले प्रस्तुत गर्छन् भने वा कमीलाई तिमी त्यस्तै हो, म यस्तै छु भन्ने आवेगहरु देश वीच चल्छ भने व्यक्ति हितमा केही हुनेछैन् । मलाई कसैले फोहर भन्नु त्यसमा खराबी होला, त्यो म मान्छु । तर आफु म यस्तो कारण, म यस्तो होईन् भन्नु बिरालोले आफ्नो गु लुकाउनु नै हो । र त्यो सफाको लागि होईन्, केवल कमजोरीको लागि हो । यो इतिहासको वास्तविकता हो ।
इतिहासमा को मान्छे कहाँ र कुन ठाउँ, कहाँको भन्ने ज्ञान भएन भने विवादमा मूर्खपन समावेश हुन्छ । र त्यो हामी मनुष्य गर्छ पनि । त्यसको वास्तविक परिणाम वा नतीजा भनेको एकले अर्कोलाई होच्याउने अनि विवादमा वहस गरेर चर्को आवाजको प्राणी हौ मनुष्य भन्ने प्रस्तुतको पहिल्लो कुरा भनेकै सीमा सुवेदी काण्ड हो, मलाई लाग्छ । र मलाई लागेकै अरुलाई लाग्नुपर्छ त्यो म विश्वास राख्दिन किनभने म, मनुष्य जन्मले होईन् कर्मले हुन्छ भन्ने एक प्राणी हुँ । र कोही कसैले मेरो अपमान गर्न सक्छ त्यो पनि म विश्वास राख्दिन् । कसैले ममा कुनै कुराको आशय व्यक्त गर्छन् भने त्यो मभित्रको कुनै खराबी वा असल नभईकन जो जस्ले यस्तै हो भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्छन् त्यो तिनीहरुकै क्षमता वा कमी हो भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वास राख्दछु । त्यसैले ढुङ्गा पूजेर भए पनि धर्मकै गलत बाटोमा आस्थालाई उनेर बसेको छु । यो मैले मनुष्यले बुझ्नु पर्ने कुरा गरेको हुँ । मैले हामीमा देखेको कमजोर यथार्थता बयान गरेको हुँ ।
अर्को, हामीले मृत्युको आगमन थाहा नपाउन गरिने कुनै कर्म काण्ड जुन धर्मको, त्यही नै काम हो । जीवनको माम पनि हो । त्यसमा आफ्नो भूमिका वा कर्तव्य सही र सत्य रुपले निर्वाह गर्न सकेन् भने मात्र कसैले कामप्रति खिल्लि गर्दा आत्माग्लानीको महसुस गर्नुपर्छ । र सुधारको बाटो हिड्नुपर्छ । तर कसैले तिमी नेपालीहरु यस्तै छौ व्यक्ति विशेषले औल्याउँदा त्यसको खण्डन गरेर कुनै शिखरमा पु¥याउनु एक त हाम्रो कमजोरी हो भने अर्को आफ्नो जीवनशैलीमा कमी छ । तर कुनै कर्मबाट विमुख भएर कतै बाँचेको त छैनौं भन्ने एउटा चेतावनी हो भने सुधारका अवसर एवम् मौका पनि हो । यो हामीले बुझ्नुपर्छ । जीवन यो दुई अर्थको यात्रा पनि हो । सही लिने र खराबलाई कुनै मलमा रुपान्तरित गरेर अगाडि लाग्नु नै जिउनु हो । अफसोच यो कुरालाई बिर्सिएर हामी पनि कुनै कोही कसैको नक्कलमा हिडे झै कुकुरले टोकेको खण्डमा त्यसलाई टोके पछि मात्र निको हुन्छ त्यो रोग भन्ने मनस्थितिमा, आधा व्यवहारबाट सिद्ध हुँदै गई रहेका छौं । त्यस्तै जो जहाँबाट जस्तोसुकै कामको लागि जीवन खर्चमा जुटे पनि त्यसको खण्डन गर्ने त्यस्तालाई मनुष्य हो भन्नु आफैलाई गिराउनु हो । हुन त म कसैको खराबको समर्थक वा प्रस्तावक होईन् । तर पनि आफुलाई नबुझेर जुन जति पनि वहस वा विद्रहोको कुरा भए त्यो सबैलाई, आफ्नै कमी कमजोरीलाई बुझ्न नसकेको नै हो भन्छु । र गोर्खाल्याण्डको सवालमा दुःख छ । त्यो दुःख मानवीय दुःख हो जुन पछिल्लो सिमाङ्कन पछि मेरो देश छिरोस् चाहन्न । साथै आफु पागल भए भन्दैमा नाङ्गै हिडेर मलाई पनि लजास्पद नतुल्याउनु मेरो अनुरोध मात्र हो । त्यसैले काम जुनै होस् त्यो पवित्र, शुद्ध हुन्छ । कामको खिल्लि गर्ने प्राणीले भोकको लागि भोजन होईन् अरु कुनै खान्छ भन्ने स्पष्ट हुँदाहँुदै पनि पूनः धनी र गरीबको वहस वा विवाद उत्पन्न कसैले गर्छ भने मरेपछि माटो नै हो शरीर त्यति नभुल्नु भन्न चाहन्छु । अतः कोही प्राणी म यस्तै हुँ भनेर भाषाले व्यक्त गर्नु भन्दा नि व्यवहारले मनुष्य हुँ भन्ने प्रमाणिकरणकै लागि बाँचौं । मर्नु त छँदैछ । मर्नु अघि के मारे भन्ने कुराको मन्थन पनि गर्नु अति आवश्यक छ । त्यसले मात्रै बोली, भाषा, पहिरन हुने प्राणी मनुष्य हुनसक्छ जुन जन्मले म यहि देशको भन्नलाई काम र कर्तव्य साथै व्यवहारसँग दायित्व निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । सिक्नुपर्छ ।
अन्तमा, पूनः के स्मरण गराउन चाहन्छु भने मेरो अपमान म आफुले बाहेक अरुले गर्न सक्दैन् । मेरो काम कुनै सानो कसैले भनेर म मान्दिन जबसम्म मैले ईमानदारी, वफादारीताका साथ त्यसको पालना गर्छु भने । यदि मसँग आत्माबल सत्यतापूर्वक छ भने विषै पनि भोजनै बनाएर खाना सक्छु किनभने म नेपाली हुँ । म नेपाली भएरै अरुलाई सुख मिलेको कुरामा गर्व गर्छु । म खराब भएर बदनामी छु भन्ने कुरा कसैले कुनै इतिहासमा देख्छ वा भेट्टाउन सक्छ, मलाई लाग्छ त्यो देख्ने वा भेट्टाउनेभित्र नै वास्तविक बदनामी हो । यो आज सबैले बुझ्नु निन्तात आवश्यक छ । र उखानै पनि छ कि जो शिशाको घरमा बस्छ उसले अरुको घरमा कुनै पत्थर फ्याँक्नु हुन्न भन्ने…। होला कतै परिवार हो–हल्ला वा स्वार्थ तर पूरै घर नै खराब भन्नु आफ्नै घर जलाएर हात सेक्नु मात्र हो । यो हामी नेपालीहरुलाई थाहा छ । सदा अरुकै आडमा नेपालीहरु बाँच्न जानेका छैनन् । मागेर पेट भर्ने व्यथा नेपालीहरुलाई लागेको छैन् । कसैलाई दबाउने इतिहास पनि नेपालको छैन्, नेपालीहरुको छैन् । नेपालीहरुको रगतमा कुनै शुद्धताको कमी कही भएको छैन् । मानवीयता जिउदो छ त नेपाली समाजमा मात्र बाँकी छ भन्दा नि हुन्छ । त्यसैले नेपाली हुँ भन्ने कुरामा दुःखी नहोऔं । कुकुर भुक्दै गर्छ हाती लम्कि रहन्छ थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यसको खण्डन गर्नुपर्छ मलाई लाग्दैन् । म नेपाली हँु…मनुष्य भएरै मर्छु । यो विश्वभर फैलि रहेका सबै नेपालीहरुमा भएको वास्तविक गुण पनि त्यही हो । यसको मुल्य कुनै सुनले तिर्न वा किन्न सक्दैन् । नेपाल जतिको धनी कुनै राष्ट्र शायदै विश्वमा अरु होला…। विश्वको निर्माण नै नेपालीहरुद्वारा भई रहेको कुरालाई गर्व नै गर्नुपर्छ । कामलाई हेप्नेहरुको दुनियाँमा नेपालीहरुले कामलाई सम्मान गरेको छ । ईमान, धर्म भन्दै निर्वाह गरेको छ । यो सबैमा ज्ञात हो । कसैले नजानेका अनगिन्ति कामहरु नेपालीहरुले मात्र गर्न सक्छन् । सबैमा चेतना होस् ।